Global Voices teny Malagasy » India : Ry Zatovolahy isany, hatsarao ao amin’ny Facebook ny hodi-tavanao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2018 14:47 GMT 1	 · Mpanoratra Neha Viswanathan Nandika (fr) i Claire Ulrich, Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, India, Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Niteraka adihevitra tao India ny fampiasa Facebook  vaovao iray. Ity fampiasa Facebook ity izay avy amin’ny marika Vaseline , karazana vokatra fikojakojana tarehy isankarazany avy amin’ny orinasa iraisampirenena Unilever, no ahafahan’ireo mpisera manazava ny volon-kodin’ny sariny ao amin’ny Facebook . Tsy vao voalohany izao no niadian-kevitra ny faniriana hanova ny ‘’endrika ho mazava’’ tao amin’ny tontolon’ny bilaogy Indiana. Na izany aza, nanolotra fihenam-bidin'ny vokatra natokana ho an’ny lehilahy, izay tena mbola vaovao tokoa ity fampiasa izay resahana eto ity. Natokana ho an’ny mpanjifa vehivavy ihany ny ankamaroan’ireo vokatra ho an’ny fanovana ‘’endrika ho mazava’’ tao amin’ny tsena Indiana . Hoy i Le Sigh  hoe :
Ny firesahany ny fanirian’ny lehilahy hananana endrika mazava fa tsy ho an’ny vehivavy no tena nanaitra ahy indrindra tamin’ity dokambarotra ity ; tena nanitikitika ahy tanteraka izany teo amin’ny lafiny antropolojika, ny vehivavy tsinona no maneho ilay kolontsaina fa tsy ny lehilahy. Azo antoka fa liam-pandrosoana tokoa ireo dokambarotra ireo amin’ny lafiny iray, rehefa ampidiriny ao anaty resany ireo lehilahy amin'ny resaka ‘’mazava endrika’’.
Raha namaly ny Le Sigh , nanome antony vitsivitsy mahatonga ireo orinasa mpanamboatra menaka manazava hoditra hikendry ny lehilahy  ny fanehoan-kevitra avy amin’i Sneha, izay miasa ho an’ny sampan-draharahan’ny dokambarotra iray.
Manome lanja bebe kokoa ny bikany amin’izao fotoana izao noho ny teo aloha, ny lehilahy any andrenivohitra any India. Ankehitriny, na any amin’ny toeram-piasana na any ivelany dia matetika mifandray amin’ny vehivavy izay mandray karama mitovy amin’izy ireo sy mitovy amin’izy ireo eo amin’ny sehatry ny asa ireo lehilahy. Ankoatra izany, satria mihabetsaka hatrany ny fifandraisana ivelan’ny rafitry ny fanambadiana amboarina, ary mifanerasera mialoha ny fanambadiana ny ankizilahy sy ny ankizivavy, dia mahatsiaro tsy mahazo aina hatrany manodidina ny bikany ireo lehilahy ary liana amin’ny fisehoana ho manintona kokoa manoloana ireo vehivavy ireo… Matetika iriana fatratra any India ny fananana hodi-tava mazava kokoa ary ao anatin’ny fifanakalozan-kevitra sy ny resadresaka hifanaovana amin’ireo lehilahy rehefa manontany izay ireo ny zavatra tiany hovaina amin'ny tenany dia fantatra fa ny lokon’ny volon-kodiny izany.
Miresaka momba ny fanavakavaham-bolonkoditra tsy tsikaritra kanefa misy any India i Sunhail ao amin’ny bilaogy Rantings of a Homesick Lunatic , izay ahitana fa efa tena lalimpaka tanteraka any amin’ny ankamaroan’ireo vondrona sosialy ny faniriana hanana endrika mazava. Miseho amin’ny endrika samihafa izany faniriana izany.
Tsikaritra mazava ao amin’ny indostrian’ny sarimihetsika izany, ary any Atsimo, tsy maintsy manana endriky ny ronono, ireo tovovavy mba ahafahany mandray ny anjara miaraka amin’ireo ‘’olo-malaza’’, izay matetika mifanohitra tanteraka amin’ny taratry ny volon-kodiny indraindray, nefa, eny e, fanavakavahana ara-pananahana kokoa no misy eto noho ny fanavakavaham-bolonkoditra. Somary mazava ho ahy fa matetika no misafidy mandrakariva ireo kandidà izay manana volon-koditra mazava kokoa ny asa manoloana ny fakantsary amin’ny fahitalavitra sy ny fampitam-baovao.
Nanamafy i Freshbrew  fa ny lafiny tena nampiady hevitra indrindra tamin’ny paikadin’ny haivarotra momba ity vokatra ity dia tsy ny fiezahana hivarotra loatra ny ‘’endrika mazava’’ fa ny fikendreny ireo lehilahy, ary noho izany antony izany no nahatonga ireo mpanjifa nahatsikaritra izany. Mihevitra i Bhatnaturally  fa mety tsy ilaina angamba ny miampanga ny mpanamboatra ny vokatra, ary mifantoka bebe kokoa amin’ny vokatra sy ny fampiasa Facebook ny natiora’ nomerika’ amin’ilay fanentanana.
Manameloka ny marika tahaka izao ny olona amin’ny fanamafisana ny hevitra fa mahasarika kokoa ny endrika mazava, tsara tarehy kokoa, ary izany dia manimba ny fiarahamonina. Mbola tsy re mihitsy ny hevitra mifanohitra amin’izany fa mitrandraka fotsiny ny vokatra efa misy ireo marika ireo (hatramin’ny ela talohan’ny namokarana ireo vokatra ireo ary efa natao ny dokambarotra).
Hita ao amin’ny fanehoan-kevitra maro ao amin’ny bilaogy  ihany koa ny hevitra mitovy amin’izany, izay ahitana ireo mpisera aterineto mihevitra fa manamarika fanavakavaham-bolonkoditra ho an’ireo izay tsy mahafantatra ny tontolo ara-kolontsaina Indiana ny safidy hanana volon-koditra mazava. Nanamarika izany teo ambanin’ny lahatsoratry ny mpikaroka Amerikana Danah Boyd  i Gautam Ramdurai.
Mahaliana ny tabataba any Andrefana, ary maka ny fakany ao anatin’ny tsy fahalalana. Ny fomba fijery momba ny hatsaran-tarehy fa tsy ny firazanana no olana – Mazava ho azy fa maro tamin’ireo izay nandray anjara tamin’ity lohahevitra ity no tsy mahalala ny tena atao hoe hatsaran-tarehy lavorary any India, ary noho izany, toa tena “manavakava-bolonkoditra” tokoa ity fampiasa ity. Nisy ireo olona tao India no nihevitra fa tena ratsy ity fampiasa ( sy ity vokatra ity)- fa noho ny antony tena hafa- Afaka manome ohatra maro avy any Andrefana manodidina io fanontaniana io ihany aho, toy ny efitra UVA hananana hoditra azon’ny masoandro, ny faniriana fatratra ny te hahia, etsetra…saingy tsy misy amin’izy ireo no afaka manazava ny fahasarotan’ity olana ity. Mahagaga ahy izany fa amin’ny maha mponina ao amin’ny tontolon’ny ‘fisaka” vaovao amin’ny vanimpotoana nomerika, dia tsy mbola manala ny solomasontsika fiarovana isika rehefa mandinika ny hetsika ara-kolontsaina sy ara-tsosialy any amin’ny faritra hafa amin’izao tontolo izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/30/130722/
 fampiasa Facebook: http://www.facebook.com/VaselineMenBePrepared
 ahafahan’ireo mpisera manazava ny volon-kodin’ny sariny ao amin’ny Facebook: http://www.facebook.com/VaselineMenBePrepared?v=wall#!/VaselineMenBePrepared?v=info
 fanehoan-kevitra maro ao amin’ny bilaogy: http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2010/07/20/skin-whitening-tanning-and-vaselines-controversial-facebook-ad-campaign.html/comment-page-1#comment-204181